“လှည့်ကင်းလေးတွေ အရင်လိုလုပ်ပါဦး” | Monywa Gazette
Home ပြည်သူ့အသံ “လှည့်ကင်းလေးတွေ အရင်လိုလုပ်ပါဦး”
မုံရွာမြို့သစ်ရပ်ကွက်နားတဝိုက် လုယက်မှုနဲ့ ခိုးမှုတွေ ခုရက်ပိုင်း ဆက်တိုက် ဖြစ်နေပြီ။
. ၁၆ ရက်နေ့က ကွန်ပျူတာကျောင်းသူတစ်ယောက် ကျောင်းဆင်းချိန် ဖုန်းအလုခံရတယ်။
. ၁၇ ရက်ညပိုင်း တိုက်တစ်လုံးသူခိုးဝင်ဖောက် ၊ ပိုက်ဆံနဲ့ဖုန်းပါသွား။
Previous articleဆားကျင်းသုဿန် ဘုန်းကြီးပျံလောင်တိုက် သန့်ရှင်းရန်လိုအပ်
Next articleနာဂဒေသကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဆိုပြီးတော့ စာရွက်ပေါ်မှာ လှလှလေး သတ်မှတ်ပေးထားတယ် ဟုဆိုလာတဲ့ လဟယ်မြို့နယ်အမတ် ဦးကယ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း